AJA's HDR Image Analyzer 12G Manolotra kalitao 4K / UltraHD HDR | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Ny AJA's HDR Image Analyzer 12G dia manome HD / UltraHD HDR avo lenta
Ny AJA's HDR Image Analyzer 12G dia manome HD / UltraHD HDR avo lenta
Nandritra ny telo taona latsaka, Aja Video Systems dia nahatalanjona ny indostrian'ny horonantsary matihanina tamin'ny alàlan'ny famatsiana karazan'entana mpamokatra sy mpiara-miombon'antoka fampandrosoana amin'ny alàlan'ny fampidirana azy ireo product lineups. Ohatra maromaro amin'ireo orinasan-tserasera avo lenta, izay ahitana:
Trano famokarana trano
Mpanome kamiao finday
avy any amin'ny lafivalon'izao tontolo izao Aja Video Systems'teknolojia. AJA dia misy vokatra avo lenta izay azo itokisana sy haitao teknolojia, ary ny farany azy ireo HDR Image Analyzer dia testamenta fanampiny ho an'io fototra io.
The HDN Image Analyzer 12G Manome fitaovana amam-pitaovana feno ho an'ny famakafakana mahomby amin'ny farany 4K /UltraHD Fenitra HDR. Ity vokatra ity dia manana tariby tokana miaraka amin'ny 12G-SDI, ao anatin'izany ny HLG, PQ, Rec.2020 ary Rec.709 avy amin'ny 8K / UltraHD2 / 4K /UltraHD/ 2K /HD votoaty ao amin'ny fitaovana 1RU misy fotoana tena mety.
Ny AJA HDR Image Analyzer 12G dia manohana harena maro be toy ny
Formula LOG fakantsary
The HDN Image Analyzer 12G dia manolotra fanohanana gamut loko ho an'ny BT.2020 sy ny BT.709 nentim-paharazana. Ny fahamalinana hardware AJA dia miantoka ny fahatokisan-tena sy fampisehoana lehibe, miaraka amin'ny fifandraisana 4x 12G-SDI bidirectional I / O, ary ny fifandraisana ShowPort. Ity mpandinika ity dia natao hampiasaina na aiza na aiza toerana ary izany rehetra izany dia isaorana ny anton-toerany 1RU, izay mifanaraka amin'ny tontolo iainana, manome mpanjifa manana fahatokisana ilaina amin'ny famokarana sy fananganana HDR tsy miovaova sy azo trandrahana.
Ny fizotry ny sary HDR 12G Fampandrosoana
The HDN Image Analyzer 12G dia novolavolaina miaraka amin'ny Colorfront, izay orinasa mpamorona rindrambaiko izay manampahaizana manokana eo amin'ny sehatry ny teknolojia fanodinana dizitaly avo lenta ho an'ny indostrian'ny sary mihetsika, ary mifantoka indrindra amin'ny fanomezana rafi-pandaharana nomerika be mpampiasa indrindra. Any ambony Hollywood ny studio sy ny fotodrafitrasa fandefasana dia mampiasa ny rafitry ny dailies niomerika ao amin'ny Colorfront amin'ny sarimihetsika sy ny famokarana fahitalavitra episodika.
Ny mahatonga ny AJA's HDR Image Analyzer 12G fampiasam-bola lehibe dia ny manome ny fifandraisana ilaina mba hanohanana ny fizotran'ny famolavolana sy ny fanadihadiana 8K / UltraHD2 HDR ary ny SDR. Ity fitaovana ity koa dia manome fitaovana fandinihana kalitao avo lenta sy avo lenta azo alaina amin'ny endrika video hafa rehetra.
Ny HDR Image Analyzer 12G dia manolotra Fifandraisana amin'ny tranonkala vaovao mahery vaika izay azo idirana na aiza na aiza ao anaty tamba-jotra amin'ny tranokala rehetra ao amin'ny OS rehetra. Io dia mamela ny fanaraha-maso amin'ny solosaina lavitra ary hanamora ny fidirana rehefa mametraka ny HDR Image Analyzer 12G any amin'ny tontolo rakitra, apetraka, ao amin'ny efitrano fikojakojana, departemanta QC ary maro hafa. Ity dia manome mpampiasa iray izay afaka manavao ny sary HDR Image Analyzer 12G lavitra ary handratra ny vatan-tsary sy fandefasana sary na aiza na aiza ilaina. HDR Image Analyzer 12G dia manolotra fiovan'ny mode HDR ihany koa ho an'ny fisintonana ny loko HDR mandeha ho azy.
12G Mpandinika sary HDR sy fandaharana azo azo zahana
Ny interface an'ny HDR Image Analyzer 12G dia manome ny mpampiasa fampiasa quadrant hijerena ny fitaovany sy ny rakitsary mandritra ny fizotran'ny asany. Ny hitsin-dàlan'ny famakafakana haingana an'ny mpandinika dia ahafahana mametraka layout efa niorina mialoha momba ny fomba fampisehoana ireo fitaovan'ny mpampiasa sy ny fomba fijeriny. Raha mila fanamboarana bebe kokoa ny mpampiasa, dia afaka misafidy fitaovana manokana haseho azy ireo amin'ny quadrants amin'ny alàlan'ny fikitihana ankavanana ny quadrant ary misafidy ny fitaovana tiany. Ny mpampiasa dia afaka misafidy ny fitaovany amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny safidin'ny quadrant amin'ny menio Analyzer Mode.
HDR Image Analyzer 12G Ary Fanaraha-maso HDR
Ny famokarana HDR dia mitaky fitaovana azo antoka sy azo vinavina amin'ny fanaraha-maso sy famakafakana ireo dingana rehetra ao anatin'izany. Natao io hiantohana ny fahitana zavakanto an'ny mpampiasa dia arahana hatramin'ny fakan-tsary hatramin'ny fisehoan'ny mpampiasa farany. AJA's HDR Image Analyzer 12G dia manome antoka fa ny mpampiasa iray dia mifehy tanteraka ny safidiny ara-teknika, ahafahan'izy ireo misambotra, mampita ary mandefa ny fitaovan'ny HDR / SDR.
Fampisehoana fanampiny an-tsary HDNN / Extraction 12G
Endri-javatra HDR Image Analyzer 12G dia misy:
Inputs Range Range
Fanaraha-maso ny fandaharana
QC (Fanaraha-maso kalitao)
Fampitana HDR farany
Fitaovana HDR Analysis
Inputs log cameras
Safidy / voavonjy voafantina
Fahatsiarovana haingana sy voaroaka ny fakana sary
Fampiasana loko no ampiasaina
Ireo miaraka amin'ireo fampiasa mivelatra, izay misy interface tsara rastera dia izay manendry fahombiazana ara-teknolojia tokana amin'ny HDR Image Analyzer 12G. Zava-dehibe ho an'ny mpampiasa izany amin'ny fitazonana ny lozisialy mitsikera ireo singa mandrafitra azy ireo rehefa mandinika ny akora ho an'ny HDR izy ireo.
HDR Image Analyzer 12G Ary ny sary azo antoka
Ny HDR Image Analyzer 12G dia manome sary an-tsaina sy fahaizana mamantatra ny antsipiriany kely indrindra ho an'ny famakafakana marina ny momba ny aken'izy ireo. Ny sasany amin'ireto fitaovana ireto dia misy:
Kalitao avo indrindra, ultra-mazava UltraHD Mpampiasa interface
Ny fahaizana mandamina fitaovana an-tsitrapo ao anaty quadrants efatra an'ny interface
Fandrindran'ny mozika fitetezam-peo
Avy amin'i Gamut
Fomba loko diso
Hatramin'ny 1993, Aja Video Systems dia namokatra horonantsary fahazoana loka, fiovam-po, I / O ary vahaolana mivantana izay nanome ny mpanjifa fahalalahana tsy manam-paharoa, fahombiazana ary fahatokisana. Ny HDR Image Analyzer 12G dia fanitarana ireo fotopoto-pitsipika tena lehibe sy ny halaviran'izy ireo naka ity orinasa teknolojia ity ho lasa mpandray anjara tsy misy kilema amin'ny indostrian'ny horonan-tsary matihanina.
Raha mila fanazavana fanampiny momba Aja Video Systems ary ny HDR Image Analyzer 12G, avy eo araraoty www.aja.com/.
VFX Artist - Novambra 29, 2020
Aja Aja Video Systems fampitana injeniera fampitana Engineering colorfront Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor HDR Image Analyzer HDN Image Analyzer 12G fampidirana isovideo, viarte, HDR, tabataba fampihenana, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, bitrate fampihenana, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw SoftAtHome, MStar, CES2017 Telo sy zana-tsipìka TV Technology Video injeniera 2019-11-29
Previous: Solontenan ny mpanjifa
Next: Jr Manager Feo sy horonan-tsary